See Burmese’monk and Islam in Burma. ကြားလေသွေးရင် ဝေးမှာစိုးတယ်.
See Burmese’monk and Islam in Burma.
ကြားလေသွေးရင် ဝေးမှာစိုးတယ်…. 🙂
ငါသာ ဦးဝီရသူတပည့်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် သိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ မွတ်စလင်ပဲ ဆန့်ကျင်ရမလား? မွတ်စလင်ကိုပဲ ရွှေလက်တွဲရမလား? ဘုန်းဘုန်း အရိပ်အခြေကြည့်ပြီး သူနဲ့ ပဏာသင့်တဲ့ မွတ်စလင်ဆိုင် အားပေးရမလား။ သူနဲ့ မဆိုင်တဲ့ မွတ်စလင်ဆိုင်ကို ရှောင်ရမလား? ဟိုလိုလား ဒီလိုလား?- (ဒီ ချစ်သူ)
ဘာ ကြည့်ကြည့်အမျိုးသား ရေးနဲ့ကြည့် ကွဲ .နော်။ စတေးတပ်တင်လဲအမျိုးသားရေး.. မန့်လဲအမျိုးသားရေး။ လိုက်ခ် လဲအမျိုးသားရေး။ ဆဲလဲအမျိုးသားရေးနဲ့ဆဲကြ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘလော့ခ် လဲအမျိုးသားရေးနဲ့ဘလော့ခ်ကြပေါ့ကွယ် နော်။ ဟုတ်ရဲ့လား ။ – (Naung Yoe)
ရွှေညဝါဆရာတော်နှင့် မ.ဟ.န ဆရာတော်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြဆဲ Sayadaw Shwe Nya Wah
On January 19, 2012 January 19, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ နေ့လည်၁ နာရီမှ စတင်၍ ၂ နာရီအချိန်အထိ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဖက်မုခ်၊ ကြားတောရလမ်း၊ ကြေးသွန်းဘုရားကြီးရှေ့ရှိ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်း ရွှေည၀ါဆရာတော်အား အရေးယူရန်ကိစ္စကို သံဃာ့နာယက ဆရာတော်တွေစုံညီစွာ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးနေကြသည်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း လူပရိသတ် ငါးရာကျော် စုဝေး ရောက်ရှိလျှက်ရှိသည်။ လုံခြုံရေးကိုလဲ အထူးတင်းကြပ်တာတာမျိုး တွေ့ရတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
On December 22, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Brief bio of Shwe Nya Wah Sayadaw and dispel Order
On December 15, 2011 January 19, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
UPDATE 19.January 2012
On October 8, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment